အကောင်းဆုံး HZS120 inclined belt conveyor ကွန်ကရစ်သုတ်စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ |Macpex
● JS2000 နှစ်ထပ်အလျားလိုက်ဝင်ရိုးအတင်းအကျပ်အရောအနှောကို ရောစပ်ထားသောစက်ရုံ 120 ၏ ရောစပ်လက်ခံထားသည့်အရာအဖြစ် လက်ခံထားကာ ခိုင်မာသောရောစပ်နိုင်စွမ်း၊ ကောင်းမွန်သောရောစပ်မှုတူညီမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်များရှိသည်။
● ၎င်းသည် ခြောက်သွေ့သော၊ မာကျောသော၊ ပလပ်စတစ်နှင့် ကွန်ကရစ်၏ အချိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် ကောင်းမွန်သောရောစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။Mixer ၏အပေါ်ဘက်အဖုံးတွင် ရေဖြန်းပိုက်၊ ဝင်ပေါက်တံခါး၊ စောင့်ကြည့်ရေးတံခါးနှင့် အစာကျွေးသည့်ကိရိယာ တပ်ဆင်ထားသည်။
● အစာကျွေးသည့်ကိရိယာတွင် ဘိလပ်မြေ၊ ပြာမှုန်များ၊ အစုလိုက်အစာသွင်းပေါက်နှင့် ရေဝင်သည့်ကိရိယာ ပါဝင်သည်။ပင်မရိုးတံပေါ်ရှိ ရေ၏သက်ရောက်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ပင်မရိုးတံသည် ကပ်မနေစေရန်အတွက် ပင်မအင်ဂျင်၏အပေါ်ပိုင်းအဖုံးပေါ်တွင် ပိုက်လိုင်းပန့်ကို တပ်ဆင်ထားသည်။
● အစာကျွေးသည့်ကိရိယာတွင် ဘိလပ်မြေ၊ ပြာမှုန်များ၊ အစုလိုက်အစာကျွေးသည့်နေရာနှင့် ရေဝင်သည့်ကိရိယာ ပါဝင်သည်။ပင်မရိုးတံပေါ်ရှိ ရေ၏သက်ရောက်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ပင်မရိုးတံသည် ကပ်မနေစေရန်အတွက် ပင်မအင်ဂျင်၏အပေါ်ပိုင်းအဖုံးပေါ်တွင် ပိုက်လိုင်းပန့်ကို တပ်ဆင်ထားသည်။
JS2000 ကွန်ကရစ်ရောစပ် plant.jpg
● အစုလိုက်အသုတ်လိုက်နှင့် သယ်ဆောင်ခြင်းအပိုင်းကို ပေါင်းစည်းထားသော သုတ်စက်နှင့် ကိုင်းညွတ်သော ခါးပတ်သယ်ယူကိရိယာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
● လုပ်ငန်းစဉ်မှာ- သဲနှင့်ကျောက်စရစ်ခြံ - သိုလှောင်ပုံး - မီတာတိုင်းတာရေးပုံး - အလျားလိုက် Belt Conveyor - ခါးပတ်ကို သယ်ယူပေးသည်။
1. အစုလိုက်အသုတ်လိုက် စက်
● အစုလိုက်အသုတ်စက်တွင် အစုလိုက် အမျိုးအစား လေးမျိုးကို အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပေါင်းစည်း Silo လေးခုပါရှိသည်။
● အစုလိုက်ပုံးသည် အလေးချိန်ချိန်ညှိခြင်းအတွက် ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးပြီး မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာ အလေးချိန်ထိန်းကိရိယာသည် အလေးချိန်ချိန်ညှိခြင်း၊ အခွံခွာခြင်း၊ အမှားအယွင်း လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ အထွက်ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သည့် ဒေါင်လိုက်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။
2. Inclined belt conveyor
● Inclined belt conveyor သည် အဓိကအားဖြင့် conveying belt၊ transmission device၊ idler၊ cleaning device၊ frame နှင့် escalator တို့ဖြစ်သည်။
● တိုင်းတာထားသော အစုလိုက်အစည်းများကို အလျားလိုက် ခါးပတ်သယ်ယူကိရိယာဖြင့် ထုတ်ပေးပြီးနောက်၊ ၎င်းကို အလယ်အလတ်သိုလှောင်မှုပုံးသို့ ညွတ်သော ခါးပတ်အကူဖြင့် ပေးပို့သည်။
● ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းကြောင်းများကို ညွတ်သော ခါးပတ်ပတ်လမ်းကြောင်း၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ပစ္စည်းပြုတ်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အောက်ဘက်တွင် ချွဲချွဲပြုလုပ်ထားသည်။
● အမှုန့်သိုလှောင်ခြင်းနှင့် သယ်ဆောင်ခြင်းစနစ်တွင် ဘိလပ်မြေ silo နှင့် screw conveyor ပါ၀င်ပါသည်။
● လုပ်ငန်းစဉ်မှာ- အမှုန့် silo - screw conveyor - powder metering bucket ။
1. ဘိလပ်မြေ silo
● ဘိလပ်မြေပုံးသည် ပံ့ပိုးမှု၊ ဆလင်ဒါ၊ ခေါက်တံခါး၊ ဘင်ထိပ်ဖုန်စုပ်စက်၊ arch breaking device နှင့် material conveying pipe တို့ ပါဝင်သည့် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။
● အမှုန့်ကို သယ်ဆောင်သည့်ပိုက်မှတဆင့် ဖိအားလေဖြင့် silo သို့ ပေးပို့ပြီး silo တွင် ထုတ်ပေးသော ဖိအားဓာတ်ငွေ့ကို silo ၏ထိပ်ရှိ ဖုန်စုပ်စက်မှတဆင့် ထုတ်လွှတ်ပါသည်။
● ပုံး၏ဗလာနှင့် အပြည့်အစုံကိုပြသရန် ဘိလပ်မြေပုံးတစ်ခုစီတွင် အထက်နှင့်အောက် ပစ္စည်းအဆင့်ညွှန်းကိန်းများကို သတ်မှတ်ထားသည်။
● Screw conveyor သည် မီတာတိုင်းတာခြင်းအတွက် silo အတွင်းရှိ အမှုန့်များကို မီတာပုံးထဲသို့ ပို့ပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
● ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် ပါဝါပို့လွှတ်သည့်ကိရိယာ၊ ဝက်အူရိုး၊ ပိုက်ကိုယ်ထည်၊ အလယ်အလတ် အထောက်အကူထိုင်ခုံ၊ အဝင်နှင့် ထွက်ပေါက်ပိုက် စသည်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး မြင့်မားသော ဂီယာနှုန်း၊ ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်များ ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း၊ အပိုင်းပိုင်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အဆင်ပြေသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဖြစ်သည်။
● 120 ရောစပ်စက်ရုံ၏ မီတာတိုင်းတာခြင်းစနစ်အား အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲထားသည်။
● သဲနှင့်ကျောက်စရစ်၏အလေးချိန်နည်းလမ်းမှာ ဒေါင်လိုက်အလေးချိန်ဖြစ်ပြီး စကေး၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ခါးပတ်စကေးနှင့် ပုံးစကေးပါ၀င်သည် ။
● ဘိလပ်မြေနှင့် အခြားအမှုန့်ပစ္စည်းများ၏ အလေးချိန်နည်းလမ်းမှာ တစ်ခုတည်းသော တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပုံးစကေးဖြစ်သည်။
● ရောစပ်ထားသော ရေနှင့် ရောစပ်မှုကို ယေဘုယျအားဖြင့် flowmeter သို့မဟုတ် ပုံးစကေးဖြင့် တိုင်းတာသည်။
● ရောစပ်စက်ရုံ 120 ၏ ထိန်းချုပ်ခန်းသည် ဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီး၊ နံရံကို အလင်းလျှပ်ကာဘုတ်ဖြင့် အလုံပိတ်ထားပြီး၊ အတွင်းပိုင်းတွင် လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်လည်ပတ်မှုစနစ် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ အရှေ့ဘက်တွင် ကျယ်ပြန့်သောအမြင်အာရုံနှင့် တောက်ပသော နယ်ပယ်ကျယ်သော လေယာဉ်မှန်ပြတင်းပေါက်၊ အလင်း။
နောက်တစ်ခု: တရုတ်စံတော်ချိန် HZS50 ကွန်ကရစ်လုတ်ကျင်းစက်ရုံ
HZS35 ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံ JS750 ရောစပ်စက်
တရုတ် HZS50 စံချိန်မီ ကွန်ကရစ် သုတ်ဆေး...